Le Nqubomgomo Yobumfihlo ilawula i-processing yedatha yakho yomuntu siqu ngesisekelo se-European General Data Protection Regulation (GDPR) ngesonto le‑Scientology International njengengxenye yokuvakasha kwakho kwi-website yethu www.scientologycourses.org (ngemuva kwalokhu: "i-website"), noma ukuxhumana kwakho nathi nge-email, ngocingo, nge-fax neziteshi zethu zokuxhumana (njenge-Facebook, Twitter kanye ne-Instagram).
Uma ufuna imininingwane eminingi yokuthi sisebenzisa kanjani idatha yomuntu siqu ngamakhukhi, ama-plugins omphakathi kanye nezinye izinhlobo zobuchwepheshe bokulandela umkhondo, udluliselwa ngomusa kwinqubomgomo yethu yamakhukhi.
Idatha yakho siqu i-processed ngesisekelo somthetho osetshenziswayo wokuvikela idatha nge‑Church of Scientology International, 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, United States of America (ngemuva kwalokhu: "CSI," "thina," "zethu”). Ungaxhumana nathi nge-email ku-dpo@scientology.net.
Lapho inkomba eyenziwe khona kule Nqubomgomo Yobumfihlo emithethweni noma ezimisweni, izichibiyelo ezingenzeka kule mithetho noma izimiso zifakiwe ngokuphelele.
Sinelungelo lokuyishintsha futhi siyivumelanise le Nqubomgomo Yobumfihlo ngokwethu. Uma kunjalo, lezo zinguquko kanye nokujwayela zizokwaziswa kuwe nge-website yethu okungenani amasonto amabili ngaphambi kokuba lezo zinguquko kanye nezimo ziqale ukusebenza. Ukunye ukusetshenziswa kweWebhusayithi yethu kuzoba ngaphansi kwenqubomgomo Yobumfihlo elungisiwe.
IYIPHI IDATHA YAKHO YOMUNTU SIQU ESIYICUBUNGULAYO?
Lapho usebenzisa i-website yethu noma iziteshi zethu zokuxhumana, siyacubungula:
Imininingwane yezobuchwepheshe, njenge mininingwane ephathelene ne-device yakho, ikheli le-IP, uhlobo lwesiphequluli, indawo okuyo kanye ne-system yokusebenza;
Ukuziphatha kokuphequlula, njengobude bokuvakasha kwakho, izixhumanisi oziqhafazayo, amakhasi owavakashelayo kanye nemvamisa ovakashele kuyo ikhasi.
Lapho uxhumana nathi ngokugcwalisa ifomu lokuxhumana kwi-website yethu, noma nge-email, ngocingo, nge-fax noma ngeziteshi zokuxhumana, siyacubungula:
Imininingwane kamazisi osinike yona, efana negama lakho lokuqala, isibongo sakhiwo, ubulili, usuku lokuzalwa, iminyaka yakho, inkampani oyisebenzelayo, okuthandayo nokukhethayo;
Imininingwane yokuxhumana osinikeza yona, njengekheli lakho le-email, ikheli leposi, izwe, inombolo yocingo nenombolo yocingo oluphathekayo;
Okuqukethwe kwezokuxhumana, njengesicelo sakho noma umbuzo;
Imininingwane yezobuchwepheshe yokuxhumana, efana nokuthi ubani oxhumana naye ekugcineni kwethu, usuku kanye nesisikhathi sokuxhumana;
Imininingwane etholakala esidlangalaleni ngawe, efana nemininingwane etholakala esidlangalaleni ku-profile yakho yezokuxhumana;
Noma iyiphi enye imininingwane yomuntu siqu osinikeza yona.
Uma wena uthatha ukuhlolwa kobuntu, njengohlolo lwe-Oxford Capacity Analysis (OCA):
Imininingwane kamazisi osinike yona, efana negama lakho lokuqala, isibongo sakho, ubulili, usuku lokuzalwa, ubudala, izintandokazi nezintshisekelo zakho;
Imininingwane yobuntu esingayithola kwizimpendulo osinikeza zona kwimibuzo ebuziwe ngesikhathi sokuhlolwa kobuntu.
Uma ufaka i-oda, okufana nencwadi noma i-kit yolwazi:
Imininingwane kamazisi osinikeza yona, efana negama lakho lokuqala, igama lokugcina, inkampani oyisebenzelayo, okuthandayo nokukhethayo;
Imininingwane ye-oda, enjengesihloko sencwadi oyithengile;
Imininingwane yokukhokha, efana nenani olikhokhele ukuthenga kwakho.
Sithola iningi lemininingwane yakho uqobo kusuka kuwe, kepha kungenzeka ukuthi sithola imininingwane eyengeziwe mayelana nezinketho zakho nokuziphatha kokuphequlula kusuka kubalingani abanjengo-Google. Uma udinga imininingwane eminingi mayelana nedatha yomuntu siqu lamaqembu asecubungula ngawe futhi utholakale kwabanye, uyacelwa ngomusa ukuthi uthintane nezinqubomgomo zawo zobumfihlo.
SIYISEBENZISELA YIPHI INJONGO IDATHA YAKHO YOMUNTU SIQU FUTHI SIYINI ISISEKELO ESISEMTHETHWENI SALOKHU?
Etafuleni elingezansi, sichaza ama-purposes esicubungula ngayo idatha yakho uqobo futhi ngesisekelo sokwenza kanjalo ngokomthetho. Sincike kulezi zisekelo zomthetho ezilandelayo:
Imvume yakho, owaziswa ngayo ukuthi kusho ukuthini lokhu kwemvume ngaphambi kokunikeza ngenkululeko imvume yakho;
Isivumelwano nawe, ukuze wenze leyo nkontileka noma ukuze kuthathqe izinyathelo ngaphambi kokungena kwisivumelwano nawe;
Isibopho esingokomthetho okufanele sisithobele;
Intshisekelo yethu esemthethweni, njengokuthuthuka okuqhubekayo kwe-website yethu, iziteshi ze-media yokuxhumana nabantu, izinsiza kanye nezinsizakalo ukuqinisekisa ukuthi unolwazi olungcono kakhulu, ukubenza baphephe ekusetshenzisweni kabi nasemsebenzini ongekho emthethweni, ukusabalalisa futhi bakhuthaze futhi bawenze atholakale wena, kufaka phakathi izinhlelo zethu zokuthuthuka kwezenhlalo nezinhlelo zokusiza abantu.
Sicubungula imininingwane yakho ukuze sikunikeze, ngendlela eqondene nomuntu futhi esebenza kahle ngezinto zokwenziwa, izinsizakalo noma imininingwane oyicelayo nge-website yethu, i-email, ucingo, i-fax noma iziteshi zokuxhumana nabantu.
Intshisekelo yethu esemthethweni
Sicubungula imininingwane yakho ukuze sikwazi ukucubungula i-oda lakho futhi sikwazi ukuletha kuwe izinto zokwakha noma imininingwane oyicelile noma ukukunikeza ngezinsizakalo ozicelayo.
Sicubungula idatha yakho ukuze sikuthumele imininingwane yoku-promote yezinsiza zethu nezinsizakalo, njengokuxhumana, ukukhuphula, ukulethwa kanye nezincwadi zezindaba, nge-email noma ezinye iziteshi zokuxhumana nge-elekthronikhi yomuntu nomuntu uma uvuma ngokucacile ukuthola imininingwane e-promotional.
Sicubungula idatha yakho ukuze sikuthumele imininingwane yokuphakamisela izinto zokwakha noma izinsizakalo ezifanayo nalezo ovele wazithenga noma wazithola kithi, njengokuxhumana, ukukhuphula, ukulethwa kanye nezincwadi zezindaba, nge-email noma ezinye iziteshi zokuxhumana umuntu nomuntu.
Sicubungula imininingwane yakho ukuze senze ezinye izinhloso zokumaketha, okufana nakwipheha noma ngesiteshi se-media yokuxhumana nabantu, i.e okusho ukukunikeza imininingwane ehlosiwe yoku-promote, njengokuxhumana, ukukhuphula, ukulethwa kanye nezincwadi zezindaba ze-CSI kanye nabalingani abakhethwe ngokucophelela.
Kuhlaka lokukuthumela imininingwane e-promotional, njengokuxhumana, ukukhuphula, ukulethwa kanye nezincwadi zezindaba, nge-email noma ezinye iziteshi zokuxhumana ngomuntu nomuntu, sicubungula imininingwane yakho ukuze siqoqe imininingwane ukuze sihlaziye imininingwane yethu yoku-promote. Yikuphi kokuqukethwe kwethu kulolo lwazi lokukhuthaza osufinyelele kulo noma oxhumeka kulolo lwazi lokukhuthaza oluchofozile.
Sicubungula imininingwane yakho ukuze sakhe i-profile eyingqayizivele yakho ukuthuthukisa ulwazi lwakho ngokuya ngendawo yakho, umlando we-oda lakho, okuthandayo, okukhethayo, okuqukethwe imininingwane yethu yokufinyelela oyitholile futhi, uma uhlole ubuntu, imininingwane yobuntu esingayithola ezimpendweni oyinikeza imibuzo ebuziwe ngesikhathi sokuhlolwa kobuntu.
Sicubungula imininingwane yakho
• uku ukulandela izibopho zomthetho okufanele sizithobele, noma
• uku ukulandela noma yisiphi isicelo esifanele esivela kubameli noma abomeleli abanolwazi, abaphethe ezomthetho, izinhlaka zikahulumeni noma izinhlangano, kubandakanya nabaphethe ukuvikela imininingwane, noma
• uku ukudlulisa imininingwane yakho emaphoyiseni noma kubaphathi bezomthetho ngokuzimela kwethu njengobufakazi noma uma sinesizathu esizwakalayo sokusolwa kwesenzo esingemthetho noma ubugebengu owenziwe nguwe ngokusebenzisa iwebsite yethu, iziteshi zethu zokuxhumana noma ezinye iziteshi zokuxhumana.
Sicubungula imininingwane yakho ukuze senze ucwaningo lwezibalo ukuze sikwazi ukuthuthukisa i-website yethu, imininingwane yoku-promote, izinto zokwenziwa kanye nezinsizakalo noma ukuthuthukisa izinto ezintsha nezinsizakalo.
Sicubungula imininingwane yakho ukuze silondoloze izintshisekelo zethu ezisemthethweni noma sigcine izintshisekelo ezisemthethweni ze-third party uma kungenzeka ukusetshenziswa kwewebhusayithi yethu, iziteshi zethu zokuxhumana nabantu noma ezinye iziteshi zokuxhumana zingabhekwa.
ukwephulwa kwanoma yimiphi imigomo esetshenziswayo yokusetshenziswa kwi-website yethu noma amalungelo obunikazi bempahla noma amanye amalungelo ethu noma awe-third party, noma
• ingozi noma usongo ekuphepheni noma ekuthembekeni kwe-website yethu, iziteshi zethu ze-media yezokuxhumana noma ezinye iziteshi zokuxhumana noma ezinye zezethu, abalingani bethu abakhethiwe noma izinhlangano ze-IT ze-third party ngenxa yamagciwane, amahhashi e-Trojan, i-spyware, i-malware noma olunye uhlobo lwekhodi enonya, noma
• nganoma iyiphi indlela enenzondo, inhlamba, ukucwaswa, ukucwasa ngokwebala, ukunyundela, ukuhlambalaza, ukulimaza noma ngenye indlela engafanele noma engekho emthethweni.
SIYITHUMELA KUPHI IDATHA YAKHO
Sithembela kuma-third parties, ngokwesibonelo:
Ukukunikeza i-website yethu (efana nomhlinzeki wokusingathwa); noma
Ukuqondisa imininingwane yethu yoku-promote (efana nenkampani yokumaketha); noma
Ukuze sicubungule i-oda lakho (njengenkampani yezokuthutha ukukulethela impahla); noma
Ukucubungula inkokhelo yakho (njengomhlinzeki we-service yokukhokha noma i-agency yokuhlola isikweletu).
Lama-third parties avunyelwe kuphela ukucubungula imininingwane yakho asenzela yona egameni lethu nemiyalo yethu ebhaliwe. Siphinde futhi sigunyaze ukuthi wonke lawo ma-third parties akhethwa ngokunakekelwa okufanele futhi azibophezele ekubhekeni ukuphepha kanye nobuqotho bemininingwane yakho.
Singabelana ngemininingwane yakho yangasese nezinye izinhlangano zikazwelonke, zesifunda noma zasendaweni ze-Church of Scientology, njengamasonto asendaweni, ama-Missions kanye nokwenza ngcono kwezenhlalo nezinhlelo zokusiza abantu. Isibonelo, singabelana ngemininingwane yakho yokuxhumana neSonto elisendaweni yangakini uma uzwakalise intshisekelo yokujoyina i-organization ye‑Scientology ukuze bakwazi ukuxhumana nawe. Kodwa-ke, sizoqinisekisa ukuthi zonke izinhlangano ze-Scientology zizobhekisisa ukuthi konke ukucubungulwa kwemininingwane yakho kuhambisana nalokho okubalulwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Singabelana ngemininingwane yakho yangasese ngezinhloso ezishiwo ku-Article 3 ne-International Association of Scientologists Administrations (IASA) kanye ne‑World Institute of Scientology Enterprise (WISE). Uma udinga imininingwane engaphezulu mayelana nenqubo yomuntu siqu ye-IASA nenqubo yeWISE, ucelwa ngomusa ukuthi uthintane nezinqubomgomo zazo zobumfihlo.
Asithumeli idatha yakho yomuntu siqu ngendlela ekhonjwa kwi-third party kunaleyo eshiwo ku-Article 4.1, 4.2, 4.3 no-4.4 ngaphandle kwemvume yakho ecacile yokwenza kanjalo. Kodwa ke, singathumela imininingwane engaziwa kwezinye izinhlangano ezingasebenzisa leyo datha ukwenza ngcono izinto nezinsizakalo futhi zivumelanise ukumaketha, ukubonisa nokuthengisa lezo zinto nezinsizakalo.
SIYICUBUNGULA KUPHI IDATHA YAKHO SIQU?
Sicubungula imininingwane yakho ngaphakathi nangaphandle kwe-European Economic Area (EEA), kufaka phakathi nase-USA. Ukuze ucubungule imininingwane yakho eyenzelwe izinhloso ezichazwe ku-Article 3 ngenhla, futhi singadlulisa imininingwane yakho kuma-third parties acubungula egameni lethu ngaphandle kwe-EEA. Ibhizinisi ngalinye elingaphandle kwe-EEA elisebenza ngemininingwane yakho lizoboshwa ngokuphepha okuvikelekile maqondana nokucubungulwa kwedatha yakho yangasese. Ngokwe-CSI, ukuvikela okunje kuvela kokuthi siboshwe ngokuqondile ngokuhambisana nomthetho we-EU kumongo wokuvikelwa kwidatha yomuntu siqu. Kuma-third parties ukuphepha okunjalo kungaba ngumphumela we:
Izwe elamukelayo elinemithetho endaweni engabhekwa njengelingana nokuvikelwa okunikezwe ngaphakathi kwe-EEA; noma
Indlela evunyelwe yokugunyazwa, efana nesinqumo se-EU US Private Shield esamukelwe yi-European Commission ngomhlaka 12 kuNtulikazi 2016.
Singadlulisa imininingwane engaziwa kanye / noma edidiyelwe ezinhlanganweni ezingaphandle kwe-EEA. Uma lokhu kudluliselwa kwenzeka, sizoqinisekisa ukuthi kukhona izindawo zokuphepha ezikhona ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nobuqotho bemininingwane yakho nawo wonke amalungelo maqondana nedatha yakho yangasese ongayijabulela ngaphansi komthetho osetshenziswayo.
YIZIPHI IZIQINISEKISO ZE-QUALITY ESIZITHOBELAYO?
Senza konke okusemandleni ethu ukucubungula kuphela leyo mininingwane yomuntu siqu edingekayo ukufeza izinhloso ezibhalwe ngaphansi kweSigaba-3 ngenhla.
Idatha yakho siqu icutshungulwa kuphela isikhathi esidingekayo ukuze kufezekiswe izinhloso ezibhalwe ngaphansi kwe-Article 3 ngenhla noma kuze kube yileso sikhathi lapho uhoxisa imvume yakho yokuzicubungula. Ukuhoxa kwemvume yakho kungasho ukuthi ngeke usakwazi ukusebenzisa konke noma ingxenye ye-website yethu. Sizokhipha idatha yakho uqobo uma ingasadingeki ngezinhloso ezichazwe ku-Article 3 ngenhla, ngaphandle kokuthi kune:
Intshisakalo enkulu ye-CSI, noma enye i-third party, ekugcineni idatha yethu yomuntu siqu iyabonakala; noma
Uyaqonda ukuthi isici esibalulekile semizamo yethu yezentengiso siphathelene nokwenza izinto zethu zokuthengisa zihambisane nawe. Lokhu sikwenza ngokwenza ngokwezifiso i-profile yakho eyingqayizivele ngokususelwa kuzimpawu ezifanele njengoba kuchaziwe ku-Article 2 yale Nqubomgomo Yobumfihlo bese sisebenzisa le-profile ukukunikeza ukuxhumana, ukukhuphula, ukuhambisa, amaphephandaba kanye nolunye ulwazi lokuphromotha mayelana nezinto zokwenziwa nezinsizakalo ezingakuthakasela.
Sizothatha izinyathelo ezifanele zobuchwepheshe nezi-organizational ukugcina idatha yakho uqobo iphephile ekungeneni okungagunyaziwe noma ukweba kanye nokulimaza ngephutha noma kokubhujiswa. Ukutholwa ngabasebenzi bethu noma abasebenzi be-third party kuzoba ngesidingo sokwazi kuphela futhi kubhekane nezibopho eziqinile zobumfihlo. Uyakuqonda, nokho, ukuthi ukuphepha nokuvikeleka kuyizibopho zemizamo emihle kakhulu ezingasoze zaqinisekiswa.
Uma ubhalisele ukuthola imininingwane yoku-promote njengokuxhumana, ukukhuphula, ukulethwa kanye nezincwadi zezindaba, nge-email noma ezinye iziteshi zokuxhumana ngomuntu nomuntu, ungaguqula okuthandayo ngokuthola imininingwane enjalo e-promotional ngokuchofoza ukuphuma kwisixhumanisi esinikezwe kulolo lwazi lwentengiso.
Uma ubhalisele ukuthola imininingwane e-promotional ephepheni, njengomagazini, ezokuxhumana, ukukhuphula, ukulethwa kanye nezincwadi zezindaba, ungenqaba ukuthola eminye imininingwane e-promotional ephepheni ngokuthumela isicelo kwi-Data Protection Officer ngokuya ngeSigaba 7.8 sale Nqubomgomo Yobumfihlo .
Unelungelo lokucela ukufinyelela kuyo yonke imininingwane yakho esetshenziswe yithina ephathelene nawe. Sigodla ilungelo lokukhokhisa imali yokuphatha efanelekile yezicelo eziningi ezilandelwayo zokufinyelela ezihanjiswe ngokucacile zokudala inkathazo noma ukulimaza things. Isicelo ngasinye kumele sisho ukuthi yimuphi umsebenzi wokucubungula ofisa ukusebenzisa ilungelo lakho lokufinyelela futhi kufanele usho ukuthi yiziphi izigaba zedatha ofisa ukufinyelela kuzo.
Unelungelo lokulungiswa kabusha, e. ukubuza ukuthi noma iyiphi idatha yakho ephathelene nawe engalungile, ilungiswa mahhala. Uma ufaka isicelo sokulungiswa, isicelo sakho sidinga ukuhambisana nobufakazi bemvelo enephutha yedatha ebuzwa ngayo.
Unalo ilungelo lokusula, e. ukucela ukuthi idatha yakho siqu ephathelene nawe isuswe uma le datha ingasadingeki ngokuya ngezinhloso ezichazwe ku-Article 3 ngenhla noma uma uhoxisa imvume yakho yokuyicubungula. Kodwa ke, udinga ukukhumbula ukuthi isicelo sokususwa sizohlolwa yithina ngokumelene:
Izintshisekelo zethu neze-third party ezingahle zibheke ngaphezulu kwezintshisekelo zakho; noma
Izibopho zomthetho noma zokulawula noma ama-oda wokuphatha noma okwahlulela angaphikisana nokususwa okunjena.
Unalo ilungelo lokukhawulwa esikhundleni sokususwa, e. ukucela ukuthi sikhawule ukucubungulwa kwemininingwane yakho uma:
Siqinisekisa ukunemba kwemininingwane yakho siqu; noma
Udinga idatha yakho yomuntu siqu ukusungula, ukusebenzisa noma ukuvikela isimangalo esisemthethweni, ngenkathi singasayidingi imininingwane yakho eyenzelwe izinhloso ezibhalwe ngaphansi kweSigaba-3 ngenhla; noma
Siyaqinisekisa ukuthi ngabe izintshisekelo zethu ezingokomthetho zibhala ngaphezulu izintshisekelo zakho uma usebenzisa ilungelo lakho lokuphikisa ngokuya ngeSigaba 7.6.
Unalo ilungelo lokuphikisa ukucutshungulwa kwedatha yakho siqu uma:
Ukucubungula kusekelwe entshisakalweni yethu esemthethweni ngaphansi kwe-Article 3 ngenhla; futhi
Uyakwazi ukufakazela ukuthi kunezizathu ezibucayi nezifanelekile ezihlobene nesimo sakho esidinga ukuphikiswa okunjalo; futhi
Izintshisekelo zethu ezisemthethweni azibhali ngaphezulu kwezintshisekelo zakho.
Kodwa ke, uma ukucubungula okuhlosiwe kufanelekile njengokumaketha okuqondile, unelungelo lokuphikisana nalokhu kucubungulwa mahhala futhi ngaphandle kwesizathu.
Unalo ilungelo lokutholakala kwedatha, e. ukwamukela kithi nge-format ehlelekile, esetshenziswa kakhulu futhi efundeka ngomshini yonke imininingwane yakho osinikezile uma ukucubungula kusekelwe kwimvume yakho noma isivumelwano nawe ngaphansi kwe-Article 3 ngenhla.
Uma ufisa ukuhambisa isicelo sokusebenzisa elilodwa noma amaningi amalungelo abaliwe ngenhla, ungaxhumana neData Protection Officer yethu ngokuthumela i-email ku-dpo@scientology.net. I-email ecela ukusebenzisa ilungelo ngeke ithathwe njengokuvuma nokuqhutshwa kwemininingwane yakho yangasese ngaphezu kwalokho okudingekayo ekusingatheni isicelo sakho. Isicelo esinjalo kufanele sihlangabezane nemibandela elandelayo:
Isicelo sakho kufanele sihambisane nekhophi elicashuniwe eli-digital lomazisi wakho osemthethweni ukubonisa umazisi wakho. Uma usebenzisa ifomu lokuxhumana, singakucela isiqinisekiso sakho esisayiniwe kanye nobufakazi bokuthi ungubani.
Sizokwazisa ngokushesha ukuthi usitholile isicelo sakho. Uma isicelo sihlangabezana nale mibandela engenhla futhi sifakazelwa ukuthi siyasebenza, sizoyihlonipha masinyane ngangokunokwenzeka nangezinsuku ezingamashumi amathathu (30) zakamuva ngemuva kokuthola isicelo sakho.
Uma unezikhalazo maqondana nokuxazululwa kwedatha yakho uqobo, ungaxhumana ngaso sonke isikhathi ne-Data Protection Officer yakho ngokuthumela i-email ku dpo@scientology.net. Uma uhlala unganelisekile ngempendulo yethu, ukhululekile ukufaka isikhalazo kuziphathimandla ezivikela idatha.